Indlela i-PR6 backlinks inokuchaphazela njani indawo yakho ye-SEO?
Wonke umntu uyazi ukuba imithombo esemgangathweni yokwakha imimandla ehambelana nomgangatho iindawo eziphezulu ze-PageRank. Bakhonza ukuphucula ukuphuculwa kweenjini kunye nokuhambisa isikhundla sakho kwiphepha lokukhawulela.
Ngaphambi kokuba uqale ukudala iphrofayili ye-backlink, kufuneka ufune uphinde uhlole nge-PR6, PR7, nakwezinye iisayithi zeenjini zokusesha.I-PageRank yinto ebalulekileyo yokubeka indawo ebonisa igunya lewebhusayithi. Ilungiselela ukulinganisa ukubaluleka kwekhasi lewebhu ngokubala inani kunye nomgangatho wekhonkco ezibhekise kuyo. Ngamanye amazwi, yinkqubo yokucwangcisa eyinkqubo eyamkelwa yiGoogle ukubeka iisayithi kwiwebhu. I-PageRank encinci yinto ephezulu, kwaye eyona nto iphezulu ishumi. Kwiintsuku zethu, i-PageRank ayisebenzisi njengemilinganiselo yodwa yempumelelo yewebhusayithi. Akuqinisekisi ukuba uphando oluphezulu, okanye ukwanda kwendlela.
Nangona kunjalo, ukufumana i-backlinks kwiindawo eziphezulu ze-PR kusabalulekile ekuphuculeni iphrofayili yakho yokwakha. Iintengiso zeGoogle kuphela kuphela eziyimithombo yewebhu kunye nekhasi eliphezulu le-PageRank. Yingakho ukudala i-backlinks apho kuya kuxelela iGoogle malunga nexabiso lakho lokuqukethwe. Ukuba iprofayili yakho yekhonkco iqulethe i-PR6-PR10 backlinks, uya kubeka kwiGoogle TOP.
Iinkqubo zokufumana i-backlinks ye-PR6
Bhoxisa i-backlinks yakho
ayikho enye webmaster kwi-niche yakho efuna ukudala ifayile efanelekileyo yekhonkco. Ininzi yemithombo ye-TOP yewebhu kwi-niche yakho ineenkampu zokwakha iinqununu eziqinileyo kwaye iqhubeka ikhangele amathuba amatsha ekhonkco. Yikholelwa okanye akunjalo, unokufumana inzuzo yakho kwi-backlinks yakho. Benzile yonke into yokuqhagamshela umsebenzi. Ngoko ke, yonke into oyifunayo kukukuncedisa ukubuyisana kwakhona ne-RLR.
Kufuneka uqhube uphando olukhuphisanayo kwaye ubone indlela abaqhubi bephambili abakha ngayo izixhumanisi. Kwaye ekugqibeleni, kufuneka uphendule okanye ubolekise amaqhinga abo. Unokuqhagamshelana nemithombo apho abakhuphiswano bakho badibene khona kunye nokubuza malunga namathuba okwakha iidibansi kwi-domain yakho.
Mhlawumbi uye wakuva malunga nale ndlela yokucwangcisa i-link efanelekileyo eyenziwa nguchwepheshe we-SEO owazileyo uBrian Dean. Kulula, kodwa unikele nge-webmasters ngeziphumo ezilungileyo.
Okokuqala, kufuneka uqhube uphando lwe-market niche uze ufumane amanqaku athandwayo kwaye axhaswe kakhulu kunye okanye izithuba. Emva koko kufuneka wenze isiqulatho somxholo wakho siphefumlelwe ngezinto ozifundileyo. Nangona kunjalo, kufuneka uphephe ukukopisha-ukunyusa njengoko kuya kudlala kuwe. Kufuneka udale inqaku elikhethekileyo ngokusekelwe kuphando lwakho. Emva koko kufuneka ubeke umnxibelelwano kwinqaku elidala lenkcazo ukuze uqinisekise ukuba abasebenzisi banokudibanisa nesiqulatho esitsha esitsha esilungisiweyo kunoko.
I-Shotgun yobugcisa bekhredithi
. Nangona kunjalo, kunomlinganiselo omkhulu omkhulu. Kusebenza kakuhle kulabo abasenayo isiqulatho somxholo esifanele sakhuthazwe. Kule meko, kufuneka uxhomekeke kwiindawo ezininzi zokukhangela izithuba zamanxeba. Le nqubo ikunika ithuba lokufumana iqela lamanye amakhasi ewebhu asekelwe kwimixholo efanayo neyakho eneeninzi ezininzi ezibonisa Source .